supreme court of Nepal(supreme court of Nepal) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ...
अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार अम्बेडकरको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेशमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक...
सर्वोच्चले ब्यूँताइदियो एमाले र माओवादी केन्द्र, ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएको छ। ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीलाई दिएको भन्दै हालेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सो नाम ऋषि कट्टेललाई नै दिएको हो। सर्वोच्च यो फैसलासँगै ओली र प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेकपा खारेज भएको...
सर्वोच्चद्वारा संसद् पुनर्स्थापना गर्न आदेश (पूर्णपाठसहित)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ। आज मंगलबार सर्वोच्चबाट दिइएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...
आजबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने
काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आज बुधबारबाट सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिटमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको हो। संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबारमात्र बस्ने भएकोले रिटहरुमाथिको सुनुवाइ सकेर आदेश आउन एक महिना...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ८ वटा रिट पेस
काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमबारसम्म ८ वटा रिट दर्ताका लागि पेस भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन मिति घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरुले आइतबार ३ वटा र सोमबार थप ५ वटा गरी ८ वटा रिट...
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ शुरु
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि केही समय स्थगन गरेको नयाँ रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रिया आजदेखि शुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अदालतले आजदेखि नयाँ रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ शुरु गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको यही वैशाख १४ गते प्रधानन्यायाधीशसहित...
गोकर्ण फरेस्टको भाडा अवधि थप प्रकरण : सर्वोच्च अदालतद्वारा लिखित जवाफ माग
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदातलले यति होल्डिङस प्रालिअन्तर्गतको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिको भाडा अवधि समाप्त नहुँदै अवधि बढाउने निर्णय गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज उक्त रिसोर्टको भाडाको अवधि बाँकी हुँदाहुँदै समयावधि बढाउनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग...
सर्वोच्चद्वारा एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण, कम्पनीलाई रु. १८ अर्बको राहात
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गर्दै करिब १८ अर्ब बराबरको राहात दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँ कर तिरे पुग्ने फैसला गरेको हो । यसमा निर्धारित रकम बुझाउँदाको दिनसम्मको शुल्क र ब्याज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । एनसेललाई सरकारले कुल...
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 'तलब रोक्ने' फैसलाप्रति प्रदेश सरकारहरूको असन्तुष्टि
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था बदर हुने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति प्रदेश सरकारहरूका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कतिपयले यो निर्णयले तत्कालै एकखाले "कानुनी रिक्तता" सिर्जना गर्ने बताएका छन् भने केहीले अदालतको निर्णयलाई...
BREAKING : राष्ट्रबैंकलाई नारायणदास मानन्धरको चुनौति, उमेर हद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले परिपत्रमार्फत उमेरको हद तोकेपछि जागिरबाट हात धुने बाध्यतामा परेका प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर न्यायको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । नेपाल राष्टबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि उमेरको सीमा तोकेर परिपत्र गरेसँगै सीइओ...
चूडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश, सुनुवाई भने जारी रहने
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई साधारण तारेखमा राखी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । कर फस्र्यौट आयोगमार्फत करोडौंको अनियमितता गरेको अभियोगमा गत जेठ १९ गते पक्राउ परेका शर्मा सर्वोच्चकै आदेशबाट यसअघि(साउन १७ गतेदेखि) न्यायिक हिरासतमा थिए । त्यसअघि उनलाई अख्तियारको...
प्रदेश २ मा स्थानीय तह थप्ने बाटो खुल्यो, के अब राजपा चुनावमा आउला ?
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय जनता पार्टीको महत्वपूर्णमध्येको एउटा माग पूरा गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको हो । प्रचण्ड सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन गरेको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर...
स्थानीय तहको संख्या नथप्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायको संख्या बढाउने भनी प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको ३ सदस्यीय कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सोमबार २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । सोसँगै विराटनगर र वीरगञ्जलाई उपमहानगरपालिकाबाट...
सरकारको स्वेच्छाचारितालाई सर्वोच्चको झापड, नवराज सिलवाल आइजी बन्ने निश्चित
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नेपाल प्रहरीका प्रमुखमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । यो फैसलासँगै सत्तासीन दल र सर्वोच्च नेतृत्वबीच तिक्तता सुरु हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता...
बजारमा फेरि करेक्सन ? यसो भन्छन् जानकार
नेप्सेमा कामना सेवा विकास बैंकको रु. १ अर्बको ऋणपत्र सूचीकृत
महालक्ष्मी विकास बैंकको ‘महालक्ष्मी मिस्ड कल’ सेवा सञ्चालनमा
के हो कमोडिटी मार्केट ? कसरी हुन्छ कारोबार ?